The Intermodal Aisa 2018 vakapupurira mukuru buri Shanghai Expo on April rechi20. kwamagwaro Izvi zvichaita omerera guru mukana pasi pakanyorwa "Mumwe Belt uye Road", clustering michina mudzimba uye munyika yose itsva uye zvigadzirwa kubva vamwe akakodzera maindasitiri, akadai ane ...
Mudziyo Tracker sei kuti logistics motokari?
Chokutanga, logistics basa anotarisana dambudziko? 1, sei nechokwadi yakachengeteka nhumbi, nenhumbi, maererano Midway tichibvisa kure? 2, sei kudzivisa mutyairi pangozi nokufambisa, kuba peturu, private kushandiswa bhazi, dhonzai upenyu woga? 3. kunzwisisa nzvimbo t ...